Xubnaha Dimoqraadiga ee Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday laba eedeymo xil-ka-xayuubin oo ka dhan ah madaxweyne Donald Trump.
“Madaxweynaheena wuxuu haystaa kalsoonida ugu dambeysa ee shacabka” waxaa sidaas yiri Jared Nadler oo madax ka ah guddi hoosaadka garsoorka ee Aqalka Wakiilada.
“Marka uu qiyaamo kalsoonidaas, islamarkaana uu dantiisa ka hormariyo tan dalka, waxa uu halis gelinayaa dastruurka, waxa uu halis gelinayaa dimoqraadiyaddeena, waxa uuna halis gelinayaa Amniga Qaranka.” Ayuu yiri.
“Caddeymaha ka dhanka ah hab dhaqanka madaxweynaha waa kuwa aad u badan oo aan la loodin karin” ayuu yiri.
Haddaba qodobadan ayaa Axmed Cali Sheekh uu wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Marayaknka.
Qodobada xil-ka-xayuubinta Trump